Khilaaf soo wajahey shirka Ahlu-sunna ee degmada Caabudwaaq, xilli aysan wali soo dhameystirmin martidii lagu casumey madasha. – Radio Daljir
Agoosto 7, 2011 12:00 b 0
Caabudwaaq, Aug 07 – Shirkii loogu magac daray Aayo katalinta Ahlu-sunna ee uga socday xarakaha Ahlu sunna degmada Caabudwaaq ee gobolka Galgaduud ayaa waxaa soo wajahey khilaaf xooggan oo sida la sheegay ku salaysan cidda noqoneysa shir-gudoonka. Khilaafka ayaa salka ku haya muran iyo is-qabqabsi in dhawaale ka dhex aloosnaa hoggaanka ururka Ahlu-sunna.
Waxaan weli soo dhameystirmin martidii lagu casumey shira, hayeeshee waxaa si toos ah loo furey 1-dii bishaan Augusto ee 2011, iyada oo rajo laga qobo in shirku si caadiya u furmo maalinta barri ah, ayna soo dhameystirmaan dhammaan xubinihii la dhawrayay, sida uu noo xaqiijiyay gudoomiyaha degmada Caabudwaaq ee gobolka Galgaduud Xasan Caabudwaaq.
Caabudwaaq ayaa la ciirciireysa xilligaan boqolaal dad ah, waxaana jira dadweyne faro badan oo isaga kala yimid gobolada dalka iyo dibada, kuwaasoo isugu jira xubno shirka lagu casumey, iyo dadweyne kale oo taageersan siyaasada Ahlu-sunna.
Dhinaca kale, degmada Caabudwaaq waxaa ku sugan ergo kala kala socota urur goboleedka IGAD, iyo dawlada Ethopia kuwaas oo la tilmaamey in ay wakiil u yihiin beesha caalamka, isla markaana ay markhaati ka noqon doonaan nuxurka waxyaabaha kasoo baxa shirka Ahlu-sunna ee Caabudwaaq.
Shirka Ahlu-sunna uga socda Caabudwaaq ayaa ku soo beegmaya xilli xarakada Al-shabaab ay isaga maanta ka baxeen qaybo ka mida gobolka Gedo, shalyna ay ka baxeen guud ahaanba magaalada Muqdisho.
Maxamed C. Kooshin
Ururka weriyayaasha aan xudduudda lahayn oo dhaleeceeyey dilka weriye Faarax Xasan Sahal oo maalmo ka hor Muqdisho lagu dilay.